MarTech Maitiro Ari Kutyaira Dhijitari Shanduko | Martech Zone
Nyanzvi dzakawanda dzekushambadzira dzinoziva: mumakore gumi apfuura, kushambadzira matekinoroji (Martech) yakaputika mukukura. Kukura uku hakusi kuzodzikira. Muchokwadi, iyo yazvino 2020 yekudzidza inoratidza kuti yapera 8000 kushambadzira tekinoroji zvishandiso pamusika. Vazhinji vashambadzi vanoshandisa zvinopfuura zvishanu zvishandiso pazuva rakapihwa, uye vanopfuura makumi maviri zvakazara mukuitwa kwemaitiro avo ekutengesa.
Martech mapuratifomu anobatsira bhizinesi rako kudzoreredza mari uye kukubatsira iwe kuti uwane kuwedzera kwakakosha kwekutengesa nekumhanyisa rwendo rwekutenga, kukura kuziva uye kutora, uye kuwedzera kukosha kwese kwemutengi wega wega.
60% yemakambani anoda kuwedzera mari yavo paMarTech muna 2022 kuwedzera bhizinesi ravo ROI.
Welcome, Top Martech Maitiro e2021
77% yevatengesi vanofunga MarTech mutyairi kune provable ROI kukura, uye sarudzo inonyanya kukosha inofanira kuitwa nekambani yega yega ndeyekusarudza maturusi eMarTech ebhizinesi ravo.
Mauya, Martech se Strategic Enabler
Takaona 5 akakosha ekushambadzira tekinoroji ane chekuita nemaitiro. Ndeapi aya maitiro, uye kuisa mari mazviri kungavandudza sei chinzvimbo chako mumusika mune yanhasi isina kugadzikana post-COVID-19 denda mamiriro ehupfumi?
Trend 1: Artificial Intelligence uye Machine Kudzidza
Tekinoroji haina kumira. Hunhu hwekugadzira (AI) chinzvimbo chekutanga pakati pevose kushambadzira tekinoroji maitiro. Kunyangwe iwe uri kunanga mabhizinesi kana vatengi, vashambadziri vari kutsvaga zvigadzirwa zvitsva uye vachifarira kufambira mberi kwetekinoroji.
72% yehunyanzvi hwekushambadzira vanotenda kuti kushandiswa kweAI kuri kugadzirisa kwavo bhizinesi maitiro. Uye, kubva muna 2021, makambani akashandisa kudarika $ 55 mabhiriyoni pane hungwaru hwekunyepedzera hwemhinduro dzavo dzekutengesa. Huwandu uhu hunotarisirwa kuwedzera nemabhiriyoni maviri.
Nhasi AI neML vane mabhenefiti maviri makuru kune ese mapurojekiti epamhepo:
Iko kugona kuitisa yakangwara analytics, iyo inobvumidza kuita mhinduro dzinoshanda
Iko kugona kuve nechokwadi chepamusoro-soro inogoneka kuita
Makambani ese makuru enhau, anosanganisira Instagram, YouTube, uye Netflix, vari kuita AI uye Machine Kudzidza (ML) maalgorithms ekuona uye kupa zvemukati izvo zvinonyanya kukwezva kutarisa kwevashandisi.
Kwemakore akati wandei apfuura, maitiro eML akadai sechatbots ave mutungamiri akakwana pakati pemhando dzeAmerica.
Imwe nzvimbo yekukurumidza kukura yanga iri AI-inotyairwa chatbots. A chatbot chishandiso chedhijitari chinogona kuwedzera zvakanyanya vaunosangana navo. Vanounganidzawo uye vanoongorora data rakakosha kubva kune vatengi, vanobvunza mibvunzo yakakosha kune vashanyi, vanopa zvigadzirwa zvitsva uye kukwidziridzwa. Muna 2021, vanopfuura 69% yevatengi muUnited States vane inowirirana nema brand kuburikidza ne chatbots. Chatbots ese anokwezva vatengi uye anoremekedza kubatanidzwa - pamwe nekuvandudzwa kwekutora mashandiro kubva pa + 25% inopinda kusvika pakupetwa kwemhedzisiro.
Nehurombo, mabhizinesi mazhinji madiki uye epakati nepakati - muchishuwo chavo chekuchengetedza mari - havasati vatora chatbots… kurasikirwa nevateereri vanogona kuita pundutso. Kuti ma chatbots ashande, haafanire kunge ari intrusive uye kutsamwisa. Dzimwe nguva makambani akaisa njodzi yakanyanyisa yechatbot yakatsamwisa vatengi vavo uye ndokuvasundira kune vanokwikwidza. Yako chatbot zano rinoda kunyatsoiswa uye kutariswa.
Maitiro 2: Dhata Ongororo
Dhata analytics ndiyo yechipiri kushambadzira tekinoroji maitiro emabhizinesi ari kuisa mari kwazvo mukati. Kutsvaga kwakaringana uye kuyera kwakakosha kuti ugamuchire ruzivo rwakakosha rwekutengesa kubva kumasoftware masystem. Mazuva ano mabhizinesi anoshandisa mapuratifomu esoftware akadai se bhodhi, Birst, uye ClearStory kuti:
Kuvandudzwa kweInteractive Dashboards
Vaka Kunaka Kuzivisa
Iyi advanced analytics inobatsira kushandisa zano rekambani zvinobudirira uye kutyaira zvirinani sarudzo dzebhizinesi nekukurumidza uye zvakanyanya kukodzera.
Dhata analytics iri mukuda kukuru munyika yanhasi. Iyo inobvumidza makambani kuwana data rekuongorora pasina kuyedza kukuru. Nekuisa yakatarwa chikuva, makambani atove nechekuita mukuunganidza data kuti uvandudze mhando. Nekudaro, usakanganwa nezvechinhu chevanhu chinosangana ne data analytics. Nyanzvi mumunda wavo vanofanirwa kushandisa iyo data yakawanikwa mukuita.
Maitiro 3: Bhizinesi Ruzivo
Bhizinesi njere (BI) ihurongwa hwekushandisa uye matekinoroji ekushambadzira ayo anobvumidza iwe kuunganidza data yekuongorora mabhizinesi maitiro uye nekumhanyisa mashandisirwo ezvigadziriso zvinogadzira.
Inenge hafu yemabhizimusi madiki nepakati nepakati anoshandisa huchenjeri hwebhizinesi mukushambadzira kwavo kwekushambadzira uye hurongwa hwekuvandudza.
Kuitwa kwebhizimusi reBI kwakasvetukira ku27% muna2021. Kukwira uku kuri kuzokura sezvo makambani anodarika makumi mana neshanu vakati vanoona masisitimu eBI semukana une bhizimusi rine simba. Muna 46, varidzi vebhizimusi vane vashandi gumi kusvika mazana maviri vakati tarisiro yavo mushure mekunge COVID-2021 denda ratendeukira kuBI senzira yekurarama.
Kusununguka kwekushandisa kunotsanangura kufarirwa kwehungwaru hwebhizinesi pakati pemabhizinesi ese. Iko hakuna kudikanwa kwehunyanzvi hwekuronga kuita neiri basa. BI software muna 2021 inosanganisira mamwe mabasa akakosha, akadai se:
Dhonza uye udonhedze kusangana uko kunoda hapana budiriro.
Inovakwa-muhungwaru uye kufungidzira kwekufungidzira
Kukurumidza kushandiswa kwemutauro wechisikigo (NLP)
Musiyano mukuru pakati pebhizinesi analytics kupa rutsigiro mukuita sarudzo dzebhizinesi chaidzo uye kubatsira makambani kukura. Zvakare, kuongororwa kwedata kunobvumidza iwe kufanotaura uye kushandura data kuita bhizinesi zvinodiwa.
Maitiro 4: Big Data
Dhata hombe inzira yakajeka kwazvo yekutora ruzivo pane kuongorora kwedata. Musiyano mukuru pakati pehombe dhata uye ongororo yedata iri kushanda neyakaomeswa seta data iyo yechinyakare software isingakwanise kuita.
Kubatsira kukuru kwedata hombe kuratidza maratidziro emakambani ekurwadziwa, kwavanofanira kushandisa simba rakawanda kana kuisa mari yakawanda kuti vabudirire mune ramangwana. 81% yemakambani anoshandisa data hombe anoratidza shanduko dzakakura munzira yakanaka.
Big Data inokanganisa makambani akakosha kushambadzira mapoinzi se:
Kugadzira kunzwisisa kuri nani kwemaitiro evatengi pamusika
Kugadzira nzira dzinoshanda dzekuvandudza nzira dzeindasitiri
Kuziva maturusi anobatsira anowedzera kugadzirwa
Kugadzirisa mukurumbira paInternet uchishandisa maturusi ekushandisa
Nekudaro, hombe data kuongororwa inzira yakaoma kunzwisisa inoda kugadzirirwa. Semuenzaniso, zvakakodzera kusarudza pakati pemhando mbiri dze data hombe mumusika:
PC-based software iyo inozoiswa muzviwanikwa zvakaita seHadoop, Atlas.ti, HPCC, Plotly
Cloud-based software yekuverenga kushambadzira kugona uye analytics mugore rakadai seSkytree, Xplenty, Azure HDInsight
Hazvidikanwi kumisa hurongwa hwekuita. Vatungamiriri venyika vagara vachinzwisisa kuti zuva hombe rinokanganisa sei bhizinesi. Muenzaniso unokatyamadza ndewekutenderera hofori yeNetflix, iyo, nerubatsiro rwe data hombe pakufungidzira kugona uye nekuvandudza mhando, inochengetedza anopfuura $ 1 bhiriyoni pagore.
Trend 5: Mobile-Yekutanga Nzira
Hatigone kufungidzira hupenyu hwedu pasina mafoni. Varidzi vebhizinesi havana kugara vakanyatsoteerera kune vashandisi ve smartphone. Muna 2015, Google inofananidzira maitiro azvino, kuvhura nhare-yekutanga algorithms kutsigira nharembozha mawebhusaiti. Mabhizinesi anga asina saiti-yakagadzirira saiti akarasa kuoneka mumasevhisi ekutsvaga.
Muna Kurume 2021, danho rekupedzisira reGoogle indexing yemafoni nhare rakatanga kushanda zvizere. Ino ndiyo nguva yemabhizinesi ekuzivisa avo epamhepo zvigadzirwa uye mawebhusaiti ekushandisa nhare.
About 60% yevatengi usadzoke kumasaiti ane nharembozha isingaite. Mabhizinesi anofanirwa kuita zvese zvinogoneka kukwirisa nekuvandudza mavhezheni ezvigadzirwa zvavo kubva kumativi ese. Uye 60% yevashandisi ve smartphone vakabata bhizinesi zvakananga vachishandisa mitsva yekutsvaga.
Nhare-yekutanga mafambiro anopindirana neML, AL, uye NLP mukushandiswa kwe izwi kutsvaga. Vanhu vari kukurumidza kutora mazwi ekutsvaga kutsvaga chimwe chigadzirwa kana sevhisi nekuda kwekukura kwayo uye nyore kushandisa.
Vanopfuura makumi maviri nenomwe muzana yevanhu pasirese vanoshandisa izwi kutsvaga pamidziyo yavo. Gartner akaratidza kuti 27% yezvikamu zvese zvepamhepo zvaisanganisira kutsvaga kwezwi pakupera kwa30. Avhareji mutengi anofarira kutsvaga kwezwi kutyper. Nekudaro, kushandisa kutsvagisa izwi muwebhu yako uye nharembozha shanduro ichave iri zano rakanaka muna 2020 nekupfuura.
Iwo ma Scaling, Zvese zvaunoda Kuti Uzive NezveKushambadzira Tekinoroji
Kuronga Shanduko Yako…
Kushambadzira tekinoroji iri kufambira mberi nekukurumidza. Kuti mabhizimusi akasiyana siyana abudirire, zvemhando yepamusoro ma analytics nematurusi anodikanwa kukwezva vashandisi kudivi ravo. Kutarisa kune aya akakosha mamartech maitiro, makambani anokwanisa kusarudza zvinovafananidza zvakanaka. Makambani anofanirwa kukoshesa maitiro aya pavanenge vachivandudza avo:
Kushambadzira tekinoroji bhajeti
Kutsvaga uye kuongorora maturusi
Tarenda kutora uye kuvandudza kwevashandi
Makambani achange achimhanyisa shanduko yekutengesa kwavo kwedhijitari uye kushambadzira nekushandisa hunyanzvi hwekushambadzira matekinoroji.
Tags: aiAnalyticschakagadzirwa njerebig databirstbhodhibusiness intelligencechatbotsclearstorydhibhodhidata analyticsshanduko yedhijitarigooglekushambadzira bhajetikushambadzira tarendakushambadzira tekinorojikushambadzira tekinoroji maitiromartechmartech maitiromobile searchmobile-kutangakugadzirisa mutauro mutauronlpizwi kutsvaga